University of Bordeaux - Education na France. Ọmụmụ na Europe
tọrọ ntọala : 1441
Students (ihe ruru.) : 53000
Echefukwala -atụle University of Bordeaux
Debanye aha na University of Bordeaux
Họọrọ n'etiti n'elu mahadum na France, na University of Bordeaux bụ ma ama maka àgwà nke ya agụmakwụkwọ ọmụmụ na nyocha.
The University of Bordeaux-enye 245 curricula na-eduga na mba degrees, haziri gburugburu anọ bụ isi na nkà mmụta sayensị ubi:
iwu, Political Science, Economy, Management
Life na Health Sciences
A nnukwu iche nke iru eru kwere omume gụnyere: 180 nwe-specialties, 115 mba diplọma na ahụ ike, a mba ubre oenology…
odika 13% nke ụmụ akwụkwọ na Mahadum nke Bordeaux bụ mba. The mahadum ewepụtala dịgasị iche iche nke mba ọmụmụ mmemme na-akụzi n'ụlọ English (ma ọ bụ ndị ọzọ na-asụ asụsụ dị otú ahụ dị ka Spanish) na na-enye ụmụ akwụkwọ ohere nke na-emecha nkwonkwo ma ọ bụ abụọ degrees.
N'ime 40 mba ọmụmụ na mmemme adị na Bachelor, Master na doctorate na ọkwa gụnyere 11 EU-kpọrọ mmemme. The University of Bordeaux bụ nke mbụ mahadum na France maka ikere òkè Erasmus Mundus Program.
The mahadum ajụ gburugburu 5,600 ndị ọrụ, nke fọrọ nke nta 3,000 bụ agụmakwụkwọ na nnyocha mkpara. Ha na-ghọtara maka àgwà nke ha na nkà mmụta sayensị na izi iru eru. Ha niile weere doctorates ma ọ bụ PhD ogo na ahụ ike na nkụzi na-emekwa ụlọ ọgwụ practitioners na Bordeaux University Hospital.
College of Law, Political Science, Economics na Management
Department of Life na Health Sciences
1441: The University of Bordeaux na-kere Pope Eugene IV na-emi esịnede anọ bụ isi ezi ikike iche – nkà, na nkà mmụta ọgwụ, iwu na nkà mmụta okpukpe.
1793: Niile mahadum na France, gụnyere University of Bordeaux, na-kagburu site French okpuru.
1808: Napoleon Bonaparte reorganizes mahadum atọ ezi ikike iche nke elekwasị anya na nkà mmụta okpukpe, nkà na sayensị.
1896: The mahadum na France na-hazigharịrị dị ka ọhụrụ iwu. The University of Bordeaux na-re-ike na ikike iche nke nkà, sayensị, iwu, nkà mmụta ọgwụ na ahịa ọgwụ.
1950s – mbubreyo 1960: The ọgụgụ ụmụ akwụkwọ debara aha ha n'akwụkwọ na-aga n'ihu site na 8,000 ka 25,000.
1960s: Mgbe-eto eto mahadum gbatịrị ya na saịtị na Campus Talence-Pessac-Gradignan.
1966: Alfred Kastler, Prọfesọ nke Physics na Mahadum nke Bordeaux, bụ ọdịda nke Nobel Nrite n'ihi na Physics.
1968: The University of Bordeaux na-subdivided n'ime atọ dị iche iche mahadum – Bordeaux 1 (iwu, aku na uba, sayensị), Bordeaux 2 (ndụ, -elekọta mmadụ na ahụ ike na sayensị), Bordeaux 3 Michel de Montaigne (nkà na mmadụ na sayensị).
1995: University Bordeaux 1 -aghọ abụọ dị iche iche mahadum. Bordeaux 1 awade agụmakwụkwọ ubi nke sayensị na technology, na Bordeaux IV Montesquieu awade iwu, -elekọta mmadụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọkà mmụta sayensị, aku na uba na management.
1997: The University of Bordeaux "osisi" na-kere, regrouping anọ iche iche mahadum entities.
2004: -Isi nke anọ mahadum banye okobot Charter nke a n'otu University of Bordeaux.
2007: The nnyocha na agụmakwụkwọ ka elu osisi nke University of Bordeaux na-kere nke na incorporates na agụmakwụkwọ ka elu institutes na ụlọ akwụkwọ nke saịtị (Bordeaux University 1, Bordeaux Segalen University, Michel de Montaigne Bordeaux 3, Université Montesquieu Bordeaux IV, Institut Polytechnique de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, Sciences Po Bordeaux).
2010: Bordeaux 1, Bordeaux Segalen na Bordeaux IV Montesquieu banye a nkịtị usoro oru ngo nkwekọrịta otú launching usoro nke na-eke a pụrụ iche oruru, ọhụrụ "University of Bordeaux".
1st January 2014: kpọmkwem 573 afọ mgbe ya tọọ ntọala ụbọchị, ọhụrụ University of Bordeaux na-re-ike.
Ị chọrọ -atụle University of Bordeaux ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: University of Bordeaux ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Bordeaux.